कुन नङले कस्तो रोगको संकेत गर्छ ?
Home स्वास्थ्य कुन नङले कस्तो रोगको संकेत गर्छ ?
औँलाको शोभा बढाउन नङले महत्वपूर्ण भूूमिका खेलिरहेको हुन्छ । पुरुषमा भन्दा शौन्दर्यको हिसावले महिलाहरुमा यसको अझ बढि महत्व हुन्छ । त्यसैले पनि महिलाहरुले नङमा विभिन्न किसिमका पालिस लगाएर यसलाई आकर्षक बनाउने कोशिस गरिरहेको हुन्छन् ।
नङले हाम्रो औँलाको शोभा बढाउनुको साथसाथै अर्को महत्वपूर्ण काम पनि गरिरहेको हुन्छ । नङले हामीलाई हाम्रो शरीरमा विकास भइरहेको रोग तथा शारीरिक समस्याको संकेत दिइरहेको हुन्छ । आफ्नो नङको रंग र आकारअनुसार रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसलाई बुुझ्न सके सम्भावित रोगलाई समयमा नै रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
नङको रंग गाढा निलो देखिएमा विलसन्स डिजिज, रेनाउड्स डिजिज, सेप्टिसेमिया, फोक्सो तथा स्वप्रस्वास सम्बन्धी रोगहरु जस्ता रोगहरुको संकेत गरिरहेको हुन्छ । यसले शरीरमा आवश्यक मात्रामा अक्सिजन पुगेको छैन भन्ने पनि बुझाउँछ ।
कालो रंगको नङले एनेमियाको संकेत गर्छ । त्यस्तै यसले ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, मृगौला सम्बन्धी रोग, एड्रिनल समस्या, कलेजोको समस्या तथा ट्रमाको पनि संकेत गरिरहेको हुन्छ ।
पहेँलो र बाक्लो नङ
नङको आकार मोटो हुँदै गएको छ, तर लम्बाइ भने बढ्न छोडेको छ भने फोक्सोमा समस्या हुन सक्छ । यो बेला नङको रंग पहेँलो हुन थाल्छ ।
नङ निकै पातलो हुँदै गएको छ र पानीमा हात डुबाउँदा नङ टुक्रिने/चिरिने, रुखो देखिने भएको छ भने थाइराइड टेस्ट गर्नुहोस् । उच्च अवस्थाको थाइराइड नङको जराबाट पनि निस्किन सक्छ ।
नङको रंग आधा फिका र आधा सेतो देखिएको छ भने जान्नुहोस् कि तपाईमा मृगौला, कलेजोको समस्या तथा एनेमिया पनि हुन सक्छ । रगतमा ‘रेड ब्लड सेल’ कम बनिरहेको अवस्थामा यस्तो संकेत देखिन्छ । यस्तो बेला अत्यधिक आइरन पाइने खानेकुराको जरुरत पर्छ ।
धेरै रातो नङले सम्भावित ब्रेन ह्यामरेजको पनि संकेत गरिरहेको हुन सक्छ । नङको रंग धेरै रातो देखिन थालेको छ भने हाई ब्लडप्रेसर तथा मुटु सम्बन्धी रोगको संकेत देखिएको हुन सक्छ । यस्तो बेला मुटु धेरै जोखिममा रहेको हुन्छ ।
संसदमा प्रचण्डको कुर्सी चेन्ज, प्रचण्ड पहिलो ‘रो’मा
आइपीएलमा सन्दिप लामिछाने स्टाइलिस प्लेयर अफ द म्याच घोषित